Iindaba-i-rocket ye-Tianzhou 4 ifika eHainan
Ngu ZHAO LEI |chinadaily.com.cn |Ihlaziywe: 2022-04-11 21:38
I-rocket ye-Long Matshi ethwele i-rocket enikwe umsebenzi wokumisela i-Tianzhou 4 i-spacecraft yempahla ifike kwi-Wenchang Space Launch Centre kwiphondo lase-Hainan ngoMvulo, i-China Manned Space Agency yatsho.
Okulandelayo, i-rocket iya kuhlanganiswa kwaye ivavanye umhlaba kunye ne-robotic spaceship kwindawo yokuqaliswa konxweme, i-arhente yatsho kwingxelo emfutshane.
I-Tianzhou 4, isithuthi sesine somthwalo welizwe, simiselwe ukumisa kwisikhululo saseTshayina iTiangong esikwi-Low-Earth orbit emalunga neekhilomitha ezingama-400 ukusuka emhlabeni ukusukela ngo-Epreli ka-2021.
Ngokolwazi olupapashwe ngaphambili yi-arhente, umsebenzi wokuphehlelelwa ucwangciselwe ukwenzeka kwiinyanga ezizayo.
Isiphekepheke sempahla ngasinye saseTianzhou sineenxalenye ezimbini-ikhabhathi yempahla kunye necandelo lokuqhubela phambili.Ezo zithuthi ziziimitha ezili-10.6 ubude kunye neemitha ezi-3.35 ububanzi.
Inobunzima obuzii-13.5 metric toni kwaye inokuthutha ukuya kuthi ga kwi-6.9 yeetoni zempahla ukuya kwisikhululo sasemajukujukwini, ngokutsho kwabayili kwi-China Academy of Space Technology.
Kwinyanga ephelileyo, iTianzhou 2 yawa yabuyela eMhlabeni uninzi lomzimba wayo watshiswa ngexesha lokungena kwakhona, ngelixa iTianzhou 3 isanxibelelana nesikhululo.
Okwangoku isikhululo saseTiangong siphethwe ngabasebenzi baseShenzhou XIII abacwangciselwe ukubuyela eMhlabeni kungekudala.
Emva kweTianzhou 4, i-Shenzhou XIV mission crew iya kuthuthelwa kwisikhululo saseTiangong kwaye ihlale apho iinyanga ezintandathu.Emva koko iilebhu ezimbini zesithuba - i-Wentian, okanye i-Quest for the Heavens, kunye ne-Mengtian, okanye iphupha lezulu-ziya kusungulwa ukuze kugqitywe isikhululo.
Ekupheleni kwalo nyaka, inqanawa yomthwalo iTianzhou 5 kunye nabasebenzi baseShenzhou XV baya kufika esitishini.
Ekugqityweni kwayo ekupheleni kwalo nyaka, iTiangong iya kuba nezinto ezintathu eziphambili - imodyuli engundoqo edityaniswe kwiilebhu ezimbini zesithuba - kwaye iya kuba nobunzima obudibeneyo malunga neetoni ezingama-70.Esi sikhululo sicwangciselwe ukusebenza iminyaka eli-15 kwaye siza kuvulelwa oosomajukujuku bamazwe angaphandle, yatsho i-arhente yasejukujukwini.
I-37-Piece ye-Non-Magnetic Tool Kit yenzelwe izicelo zokulahla ibhombu.Zonke izixhobo zenziwe nge-beryllium copper alloy.Sisixhobo esibalulekileyo xa abasebenzi bokulahla iziqhushumbisi behlukanisa iziqhushumbisi ezikrokrisayo ukuze baphephe ukuvelisa iintlantsi ngenxa yemagnethi.
Ixesha lokuposa: Apr-12-2022
Iskena esiphathwayo seX-Ray, Telescopic Manipulator Arm, I-X-Ray Baggage Scanner, Ibhola lokugada, Inkqubo yokuHlola yoKhuseleko lweX-Ray, Ukulandela umtshini oqhumayo,